स्वास्थ्य/जीवनशैली Archives - कृषि पत्रिका
जाडोमा प्रशस्त सागसब्जी हुन्छ। रायो, तोरी, चम्सुर पालुंगोजस्ता साग यही समयमा उत्पादन हुन्छ। मौसमी सागले स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा गर्छ। जाडोयाममा पाइने बहुगुणकारी अर्को साग हो, मेथी। मेथीको साग स्वास्थ्यका दृष्टिले अत्यन्त लाभदायक मानिन्छ । १. धेरैजसो मानिसहरुलाई पेटसम्वन्धि मस्याले हैरान पार्छ । यसमा कब्जियत र ग्यास्ट्रिक प्रमुख छन् । मेथीको हरियो साग खाँदा तपाईंको पाचनतन्त्रले […]
सिस्नोको नियमित प्रयोगले स्वास्थ्यमा पर्ने सकारात्मक परिवर्तन त हुन्छ नै यसवाट धेरै पोषक तत्व पनि पाउन सकिन्छ । सिस्नोवाट क्याल्सियम, प्रोटिन, भिटामिन सि, कार्वोहाईडेट, फाइवर, फस्फोरस र फलाम पाईन्छ भने मुटु रोग, मधुमेह, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई फाईदा गर्दछ । भने उच्च रक्तचापलाई कम गर्छ । प्रोस्टेड ग्लाण्डर वाथको समस्यालाई फाइदा पु¥याउछ । छाला र […]
शुक्रबार २७ असार, २०७६
दालचिनी र तेजपातको स्वाद सुवासिलो र मीठो हुन्छ र यसलाई अधिकतम मसलाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । दालचिनी हाम्रो भान्छामा सजिलै पाइने मरमसला हो । यसलाई प्रायस् चियामा हालेर खाने गर्दछ । यसमा फाइबर, क्याल्सियम तथा आइरनको मात्रा बढी हुने गर्दछ । यसले विभिन्न परिकार स्वादिलो बनाउने मात्रै होइन, विभिन्न रोगबाट बचाउने तथा उपचारको काम पनि […]
बिहिबार १९ बैशाख, २०७६
एजेनसी। फलफुलहरुमा अंगुर विशेष मानिन्छ । यसको स्वाद , प्रकार र सहजै उपलव्ध हुने गुणले यसको महत्वलाई अझ बढाएको छ । अंगुरको स्वाद जति मिठो हुन्छ त्यसको सयौंगुणा फाईदा हाम्रो शरीरलाई भैरहेको हुन्छ । यस्ता छन् अंगुरका फाईदाहरु : १. अंगुरमा प्रशस्त मात्रामा आईरन पाइने हुनाले हाम्रो शरीरका हाढहरुलाई मजबुत र बलियो बनाउछ । साथै […]
शनिबार १९ माघ, २०७५
रायोको सागमा भिटामिन–के प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । भिटामिन केले हड्डीलाई आवश्यक पर्ने खनिज प्रदान गर्छ । साथै, यसले रगत जम्ने र अनावश्यक ठाउँमा क्याल्सियम जम्मा हुने क्रम पनि रोक्छ । हड्डी खिइने समस्या भएकाहरूका लागि रायोको साग लाभकारी हो । त्यस्तै रायोको सागबाट पाइने फाइदाहरुलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं । रायोको सागबाट भिटामिन के, […]
ललितपुर। स्थानीय गाईको गहुँतबाट १४८ प्रकारका रोग निको हुने वैज्ञानिक अनुसन्धानले प्रमाणित गरिसकेको छ । स्थानीय गाईको घ्यूले बढेको कोलेस्टेरोल (रगतमा हुने बोसो)ले सन्तुलन गराउनुका साथै मुटुरोगका लागिसमेत लाभदायक हुने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । रुसी वैज्ञानिक शिरोबीचले मानिसमा हुने रेडियोधर्मी कणको प्रभाव नष्ट गर्ने क्षमता गाईको दूध, दही, घ्यू, गहुँत र गोबरमा हुने अनुसन्धानबाट […]
आइतबार ०७ असोज, २०७५
एजेन्सी। स्वास्थ्यका लागि मकै अत्यन्त लाभदायक हुन्छ । यसमा धेरैथरी मिनरल पाइन्छन् र तिनले शरीरलाई पौष्टिक आहार दिन्छन् । जानौं यसका फाइदा : आँखा : आँखा स्वस्थ राख्नका लागि मकै अवश्य खानुस् । यसमा बीटा क्यारोटिन र भिटामिन ए प्रचूर मात्रामा हुन्छ र यसले आँखाका समस्या हटाइदिन्छ । कोलेस्ट्रोल : मकैमा भिटामिन सी, केरोटेनाइड र […]
किसमिस खानुका यस्ता चामत्कारिक फाइदा , जानिराखौं
आइतबार ३१ भदौ, २०७५
एजेन्सी। आयुर्वेदका अनुसार प्रत्येक दिन विहान खाली पेटमा किसमिस खाने गरेमा विभिन्न चामत्कारिक फाइदा हुने बताइन्छ । यसरी नियमित सेवना गर्नाले क्यान्सर र मृगौंला सम्बन्धी रोगबाट बच्न सकिन्छ । साथै यसबाट शरीरिक कमजोरी सम्बन्धी कमजोरी हटाई, शक्रित बढाउन किसमिसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । ज्वरो निको पार्ने : किसमिसमा पाइने एन्टी बायोटिक तत्वले ज्वरोलाई छिटो कम […]
बिहिबार ०७ असार, २०७५
एजेन्सी। गर्मी मौसममा खानपानमा अलिकता लापरवाहीले पनि बिरामी पर्ने सम्भावना हुन्छ । जाडो मौसमको तुलनामा गर्मीमा पाचन शक्ति कमजोर हुन्छ । यस्तो बेला बढी तारेको या मसालायुक्त खाना धेरै खानुहुँदैंन । फुड प्वाइजनको समस्या हुने पनि यही मौसममा हो । त्यसैले यो मौसममा हल्का या सजिलै पच्ने खालको खाना खानुपर्छ । गर्मीमा यी तरकारी खानु […]
ललितपुर। ताजा हरियो तरकारीको माग मात्र होइन, मूल्य पनि बढी हुन्छ । जति महँगो परे पनि ताजा नै किन्ने र तत्काल पकाइहाल्ने आम उपभोक्ताको बानी छ । तर, त्यस्ता ताजा र चिल्लो देखिएका तरकारीमा विषादीको मात्रा उच्च हुने विज्ञहरू बताउँछन् । उच्च विषादीयुक्त तरकारी तत्काल पकाएर खाँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने तथा दीर्घकालमा क्यान्सरसमेत निम्त्याउन सक्ने चिकित्सकको भनाइ […]